စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ - အင်္ဂါနေ့ပွဲစဉ် & ချည်ငင် |
This bonus will be active daily on 4th, 11ကြိမ်မြောက်, 18ကြိမ်မြောက်, 25ဧပြီလကြိမ်မြောက် 2017 (BST).
To be eligible fora50% up to £50 Bonus and 10 bonus Spins, ကစားသမား£ 10 နိမ့်ဆုံးငွေသွင်းရပါမည်.
Free spins and Bonuses can take up to3သင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့မြှင့်တင်ရေးရဲ့အဆုံးကနေအလုပ်လုပ်ရက်ပတ်လုံး.
သာကဤဂိမ်းအပေါ် wagering: Triple နီဟော့7ရဲ့အခမဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲ, သူမဟာသူဌေးမိန်းကလေးရဲ့, တက္ကဆက်ပြည်နယ်လက်ဖက်ခြောက်, Triple စိန်, 100,000 ထုချွန်းပုံ, ဗိုလ်ကြီး. Quid ရဲ့ရတနာရှာပုံတော်, ဖာရောဘုရင်၏ Fortune မဂ္ဂဇင်း, လီယိုပတ်ထ, da Vinci စိန်, စိန်ဘုရင်မ, ပူပြင်းတဲ့ Roll စူပါ Times သတင်းစာ Pay ကို, အလယ်ခေတ်ငွေ, Nouveau Rich, ကျောက်ထရံမှ Shamrockers Eire, ဂတ်စ်ကလေး!, ကြောင်, Kitty တောက်ပနေ, နောဧရဲ့သေတ္တာ, နော်ဒစ်သူရဲကောင်းများ, အသံတိတ်ရုပ်ရှင်, သစ်တော၏ Pixies, Black ကမုဆိုးမ, ငွေသား Coaster, လီယိုပတ်ထ PLUS, ဝံပုလှေမွန်း, da Vinci စိန် Dual-Play စ, Firehouse Hounds, ရွှေနတ်ဘုရားမတစ်ပါး, Goldify, စန်းမာ၏မျက်နှာဖုံးများ, ထိုပိရမစ်၏ဥစ္စာဘဏ္ဍာ, Wolf က Run ကို, အလှမယ်နီ, အလှမယ်ဖြူ, ပူဖောင်းတပ်, လူသေ၏နေ့, မိသားစု Guy, မီးမြင်း, မီး opal, ဥယျာဉ်ကိုပါတီ, Ghostbusters, ရွှေ Jungle, ဂရန်းဧကရာဇ်, ငွေသား Coaster, လီယိုပတ်ထ PLUS, ဝံပုလှေမွန်း, da Vinci စိန်, dual-Play စ, Firehouse Hounds, ရွှေနတ်ဘုရားမတစ်ပါး, Goldify, စန်းမာ၏မျက်နှာဖုံးများ, မာယာစည်းစိမ်ဥစ္စာသည်, ထိုပိရမစ်၏ဥစ္စာဘဏ္ဍာ, Wolf က Run ကို, အလှမယ်နီ, အလှမယ်ဖြူ, ပူဖောင်းတပ်, လူသေ၏နေ့, မိသားစု Guy, မီးမြင်း, မီး opal, ဥယျာဉ်ကိုပါတီ, Ghostbusters, ရွှေ Jungle, ဂရန်းဧကရာဇ်, Gypsy မွန်း, Hexbreaker 2, BloomJeopardy ခုနှစ်တွင်!, Prowling Panther, ဆိုက်ဘေးရီးယားမုန်တိုင်း, Fortune® Triple အလွန်အမင်းလည်၏ဘီး, Fortune® Ultra5Reels ၏ဘီး, ကံကောင်းလာရီရဲ့ Lobstermania 2Natural အင်အားကြီးနိုင်ငံများ, ပစိဖိတ်ပရဒိသု, Sherlock Holmes The Hunt for Blackwoodtokidoki – Lucky Town, Cybertron ဘို့ Transformers တိုက်ပွဲ, သကြားလုံးအဖျော်ယမကာ, အဲဂုတ်တုပွညျ၏ဦးရစ်သရဖူ, Troy ၏ဥစ္စာဘဏ္ဍာ, 1421 Zheng သူ၏ Voyages, 100 အမျိုးသမီးများ, 100 ပန်ဒါ, Apollo နေထွက်ရာတိုင်းပြည်, Stinkin’ Rich, ဝံပုလွေမြင့်တက်, အနောက်တိုင်းခေါင်းလောင်း, Starburst, Gonzo ရှာပုံတော်, အမွှာလည်, Spinata Grande, ထုချွန်းပုံ, piggy စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်, ဂျက် Hammer, ချိတ်သူရဲကောင်းများ, ငါ့ကို dazzle, နီယွန် Stax, ဂျက်နှင့် The Beanstalk, အောင်မြင်သော, ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Rush, အလင်းအိမ်, ဒစ္စကိုလှည့်ဖျား, Koi မင်းသမီး, ဒဏ္ဍာရီလာအိမ်ထောင်မကျခင်, Sparks, စတစ်ကာများ, မှော် Portal, Blackjack Classic, အသီးဆိုင်, ပန်းပွင့်, မျှော်စင် Steam, Fisticuffs, ကံကောင်း Angler, လေဆင်နှာမောင်းခြံနဲ့ Escape, Subtopia, ဂျက် Hammer 2, ဘစ်ဘန်း, slot ဘုရင်, ဂြိုလ်သား, တောက်ခြင်း, နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏မဟာ, မောင်း, Aloha, ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား, Nrvna, ဝက် Fly သောအခါ,, Atlantis ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် Legends:ဧဒုံမြင်းစီး hood ကို, စစ်ဘုရင်များ:ပါဝါ၏ crystals, ခရစ္စမတ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, Joker Pro ကို, will count towards the reduction of the wagering requirement.
အပိုဆုခရက်ဒစ်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်အောက်ပါဂိမ်းအပေါ်အသုံးပြုရနိုင်ရင်: ဂြိုလ်သား, Dracula, သေနတ် '' N ကို’ နှင်းဆီပန်း, လူးစ Hendrix, South Park, South Park ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Chaos, ဘုရားသခင့ Fortune မဂ္ဂဇင်း, အဆိုပါမမြင်နိုင်သောက Man, Cleopatra Megajackpot, ဆိုက်ဘေးရီးယားမုန်တိုင်း Megajackpot, ကျွန်း O'Plenty, Wolf က Run ကို, စတား Lantern, Gong Xi Fa Cai, ပိုများသောမျောက်များ, Genie ထီပေါက်, Winstar, တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်, Batman, က Superman, အဆိုပါ Flash ကို, Green Lantern, Holly Madison နှင့်အတူတစ်ဦးညနေခင်း, Psycho, ဂျိမ်းစ်ဒင်း, အဆိုပါဝက် Wizard ကို, Thunderstruck II နှင့် Avalon.